YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, March 05
NLD ဗဟို ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ် ၄ ဦးကို ကိုယ်စား လှယ်များ အဖြစ်က ရုပ်သိမ်း
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/05/20130အကြံပြုခြင်း
Mar 5, 2013 4:24am
ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ CMJ စက်ရုံမှ တရုတ်များသည် ဂျော်နိုင်ငံသား အာလဗို များကို ခေါ်ဆောင်ကာ
CMJ စက်ရုံမှ မြန်မာအလုပ်သမားများ၏ အဆောင်သို့ 3.2.2013 နေ့5.30 လာရောက်ပြီး
ဤသို့ သော အပြုအမူမျိုးများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ ပါသည် အရင်ကတင်ပြထားသလိုပါပဲ
သူတို့ ပြောတဲ့အသက်အာမခံချက်ဆိုတာ ဒါလာဗျာ ၊၊
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၂ ရက်၊ စနေနေ့က နေပြည်တော်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်မှာ လူထုဟောပြောပွဲတခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ RFA အဖွဲ့သား မခင်ခင်အိက တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီနှစ်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘဲဆုရှင်လောင်းအဖြစ် အဆိုပြုခံရသူ အရေအတွက်ဟာ စံချိန်တင်ရလောက်အောင် များပြားတယ်လို့
နိုဘဲဆုဌာနက ပြောပါတယ်။ အဆိုပြုစာရင်းမှာ လူပုဂ္ဂိုလ် ၂၀၉ ဦးနဲ့ အဖွဲ့အစည်း ၅၀ ပါဝင်တဲ့အတွက် စာရင်းဝင်အရေအတွက် စုစုပေါင်း ၂၅၉ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က အဆိုပြုခံရသူပေါင်း ၂၄၁ ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီနှစ်အဆိုပြုခံရသူများစာရင်းမှာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက တာလီဘန်တွေ ပစ်ခတ်လုပ်ကြံလို့ ဦးခေါင်းမှာ သေနတ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးများ
ပညာရေးအတွက် ဆော်သြလှုပ်ရှားသူ မာလာလာ၊ အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ဘီလ်ကလင်တန်၊ ရုရှားလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့၊ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမ္မတ စန်တို့စ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ပါဝင်ပြီး၊ GAVI ခေါ် ကမ္ဘာ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ အမေရိကန် စစ်သည်တော်တို့ကလည်း ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
နိုဘဲဆုဌာန အကြီးအကဲ Geir Kundestad က ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘဲဆုအတွက် အဆိုတင်သွင်းမှု အရေအတွက် ထိုးတက်လာတာဟာ နှစ်စဉ်မဟုတ်ပေမယ့် ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင် အတက်ဘက်ကိုပြနေကြောင်း၊ ဒါဟာဒီဆုအပေါ် ကမ္ဘာ့လူထုရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု တိုးတက်နေတာကို ထင်ဟပ်နေကြောင်း
ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘဲဆုရှင်လောင်းအဖြစ် အဆိုပြုလွှာတွေကို ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား လက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ဆေးခံရသူ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ထမ်းတစ်ချို့ မူလနေရာတွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေ
ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နဲ့ နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနအတွင်းက အကျင့်ပျက်လာဘ်စားမှုတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး နေပြည်တော်မှာ ခေါ်ယူစစ်ဆေးခံနေရတဲ့ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းရဲ့ အကြီးတန်းအရာရှိ ၈ ဦးထဲက ၇ ဦးကို အခု မတ်လဆန်းက ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး၊ မူလရာထူးတွေမှာ ပြန်လည်ခန့်ထားလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ပြန်လွတ်လာတဲ့ ဆက်သွယ်ရေး အရာရှိတွေထဲမှာ ဦးမြင့်ဦး၊ ဦးစိုးအောင်၊ ဦးစိုးမိုးနိုင်၊ ဦးခင်မောင်တင်၊ ဦးဝင်းနိုင်၊ ဦးမျိုးညွန့်အောင်၊ ဦးဌေးဝင်းတို့ ပါဝင်ပြီး၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းရဲ့ အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးသိန်းဦးကိုတော့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ ဆက်လက်စစ်ဆေးနေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ နီးစပ်သူတစ်ဦးက RFA ကို အတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွင်းက အကျင့်ပျက်လာဘ်စားမှုတွေကို ရန်ကုန်အခြေစိုက် မှုခင်းတပ်ဖွဲ့ CID က ဦးဆောင် စစ်ဆေးနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ နေပြည်တော် ဘုရားကုန်းရဲစခန်းက တာဝန်ကျရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က အကျင့်ပျက်လာဘ်စားမှုတချို့ကြောင့် ရာထူးက တစ်နှစ်အနားပေးခံရတဲ့ အော်တိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးဇော်မင်းဦးကိုလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ မူလရာထူးနဲ့ ပြန်လည်ခန့်ထားခဲ့တယ်လို့ စုံစမ်းသိရပါတယ်။
ဒီအကျင့်ပျက်လာဘ်စားမှုနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး တရုတ်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ ZTE၊ Huawei ကုမ္ပဏီတို့နဲ့ အကျိုးတူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ Elite၊ Asia Mega Link၊ တာမိုးညဲစတဲ့ ကုမ္ပဏီ ၁၃ ခုက တာဝန်ရှိသူတစ်ချို့ပါ ပြီးခဲ့တဲ့လတွေက ခေါ်ယူစစ်ဆေးခံခဲ့ရပါတယ်။
မြန်မာ့ပြည်တွင်းရေးကို ထပ်ပြီး ဝင်ရောက် မနှောင့်ယှက်ကြပါနဲ့တော့
(မနှစ်က ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု သတင်းထွက်ပေါ်အပြီး ဖတ်မိလိုက်တဲ့ တကယ့်အဖြစ်အပျက် သမိုင်းတစ်ခုကို မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ ဗဟုသုတရစေသောငှာ ငရဲသားမှ မူရင်းအတိုင်း ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါသည်.။)
တရုတ်သံအမတ်ကြီး ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံ
ဒီချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိူင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီး Mr. Li Junhua တို့သည် ယနေ့ ညနေ ၆း၃၀ နာရီတွင် ရွှေမြန်မာဟော်တယ် (နေပြည်တော်)တွင် တွေ့ဆုံစဉ်....
"photo Sun Ny
အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဒဏ်ရာပြင်းထန်သည်ဟု ဒေသခံများမှ ပြောကြားသော်လည်း ခုချိန်ထိ ဆေးရုံရောက်သည့်အထဲ မပါသေးပါ ။ဒဏ်ရာ များ ဖြင့် ပုန်းနေသူ ရွာသား(၅) ဦး ထပ်မံတွေ.ရှိခဲ့။ကွင်းထဲတွင် စုပြီးထိုင်နေသော ရွာသူ/သား (၂၀၀) ခန်.တွေ. ရှိခဲ့။ဆေးပါရင် ပေးခဲ့ပါဟုပြော သဖြင့် သူတို.ထဲတွင် ဒဏ်ရာရသူများရှိနေနိုင်သည်။( 3:14 AM) အဒိတ်ကျေးရွာ ၊ မအူပင်မြို. (27-2-2013)
အမေတို့နိုင်ငံမှာ နှစ်၅၀လောက် စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ အစိုးရရဲ့ ခွန်အားက အရမ်းကြီးနေပါပြီ။ အစိုးရရဲ့ အင်အားကို ထပ်ဖြည့်ပေးဖို့၊ အစိုးရရဲ့ အင်အား အခုထက်ပိုကြီးထွားလာအောင် အကူအညီ ထပ်မပေးသင့်ဘူး။ ပြည်သူတွေ အင်အားကြီးလာအောင်ပဲ ကူညီကြစေချင်တယ်။ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) (22-11-2012)
ပလောင်အကြမ်းဖက်မှုမှ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြသော အဒိတ်/ပလောင်/ကွန်ဒိုင်းလေး ကျေးရွာမှ လူနာများကို မအူပင် အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံမှ ၁/၃/၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် ဆင်းခိုင်းခဲ့ရာ ဒဏ်ရာများ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပျောက်ကင်းသေးတဲ့အတွက် လူနာများ၏ ဆန္ဒအရ မြောက်ဒဂုံ ရှိ ဦးကျော်သူ၏ ဆေးရုံသို့ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ရန် လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပြီး၊
ဆေးလာရောက်ကုသသူလူနာ ၉ ဦးအနက်မှ သေနတ်ကျဉ်မှန်ထားသော ကိုစိုးမင်းဦးကို ဦးကျော်သူဆေးရုံမှာ မေးရိုးအား သေနတ်ကျဉ်မှန်ထားသဖြင့် အင်းစိန်ဆေးရုံသို့ လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ပြီး စမ်းသပ်စစ်ဆေးစဉ် စိုးရိမ်စရာမရှိဟု ဆိုသော်လည်း သွားဆရာဝန်နှင့် ထပ်မံ ကုသရန် ဆေးရုံမှပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Mar 5, 2013 6:36am
မအူပင်မြို.နယ်၊မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ.နဲ.လယ်သိမ်းခံလယ်သမားတွေရဲ.ပဋိပက္ခ မှာဒါဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ လယ်သမားတွေဟာ ရန်ကုန်ရှိ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းမှာလာရောက်ဆေးကုသမှုခံယူနေပါတယ်။ ဒေါ်ညိုမာသက် တင်ဆက်ထားပါတယ်။
ဦးစိုးသိန်းဟာ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် သမ္မတရဲ့သဘောထားတွေကို နောကြေအောင်သိနေလို့ ဒီလိုပြောခဲ့တာလား။
တစ်ဖက်ကစဉ်းစားပြန်ရင်လဲ ဦးစိုးသိန်းက သမ္မတရဲ့ယုံကြည်မှုကို အသုံးချပြီးအဖေ့ထက်သားတစ်လကြီး ဆိုသလို သမ္မတရဲ့သဘောထားမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်သဘောထားကိုယ်ပြောခဲ့တာလား။
၀န်ကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ လက်လွတ်စပယ်ပြောတာကို သမ္မတကထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ မတတ်နိုင်တဲ့ သဘောလား။ ၀န်ကြီးအပေါ် သမ္မတရဲ့အာဏာသက်ရောက်မှုများမရှိလေရော့သလား။ အားနာစရာ၊ မပြောရဲစရာ၊ ထောက်ထားစရာတွေများ ရှိနေပါသလား(ဦးစိုးသိန်းက MIC ဥက္ကဋ္ဌကြီးမဟုတ်ပါလား)။
ဦးစိုးသိန်းက သမ္မတကိုတောင် ဘေးဖယ်ထားပြီး ကိုယ်တိုင်ပဲသမ္မတရဲ့ဘိုးအေပုံစံမျိုး ဂိုက်ဖမ်းနေတာ ဆိုတော့ ၀န်ကြီးကသမ္မတအပေါ် ဘယ်လိုလွှမ်းမိုးမှုတွေများရှိနေပါသလဲ။ သမ္မတက ကျွန်တော်ပြီးရင် ပြီးတယ်။ ကျွန်တော်ဖြူဆိုဖြူ၊ ကျွန်တော်မဲဆိုမဲ၊ ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ထုတ်ပြ(Show)ချင်တာလား။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/05/2013 1 အကြံပြုခြင်း
by Aung Zaw Bo on Tuesday, March 5, 2013 at 5:21am ·
ကြိုတင်ဝန်ခံထားလိုတာက ကိုထွန်းဟာ၊ ပထဝီပညာရှင်၊ သမိုင်းပညာရှင်၊ မနုဿဗေဒပညာရှင် နဲ့ Fossil Geologist ရုပ်ကြွင်းဆိုင်ရာဘူမိဗေဒပညာရှင်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။http://www.geolfriends.com မှာ ၁၉၈၅ ခု ဇန်ဝါရီလထုတ် ငွေတာရီ မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့ဖူးတဲ့၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ် ဘူမိဗေဒဌာနမှ တွဲဖက်ပါမောက္ခ ဆရာကြီးဦးဘမော် ရဲ့ မြန်မာအစဆောင်းပါးကို၊ ဖတ်မိတာမို့၊ ကူးယူဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။
အထူးကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ကိုးကားကူးယူဖော်ပြခြင်း : မန္တလေးတက္ကသိုလ် ဘူမိဗေဒ တွဲဖက်ပါမောက္ခ ဆရာကြီးဦးဘမော်၊ Myanmar type courtesy by Ko Saw Kyaw Htike (2002, DGGL),http://www.geolfriends.com, http://myanmartravelinformation.com, http://www.ace.hu, http://www.sacred-texts.com
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်မှ ကိုထွန်း ကူးယူဖော်ပြထားသော ဆောင်းပါးအား တဆင့်ကူးယူဖော်ပြပါသည်.